विदेशबाट युवा फर्काउन रोजगार होइन, स्वरोजगारका कुरा गरौं : डा. गुरुङ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
विदेशबाट युवा फर्काउन रोजगार होइन, स्वरोजगारका कुरा गरौं : डा. गुरुङ
असार १३, २०७५ बुधबार १४:५०:४८ | रीतु थेबे
काठमाडौं – काम गर्न सक्ने युवा जति रोजगारीका लागि विदेश जान थालेपछि हिजोआज यो विषय राजनीतिसित दह्रोगरी जोडिन थालेको छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार भएपनि विदेशमा भएका युवालाई स्वदेश फर्काउने तथा देशभीत्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विषय कतै न कतै जोडिएकै हुन्छ ।
तर सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहोला भन्ने आशंका भने गर्न सकिन्छ, यसअघिका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाले । विदेशमा रहेका युवा फर्काउन कस्ता योजना चाहिन्छन्, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न के गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यसमेत रहेका नेपाल इन्टिच्युट अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज (निड्स)का अध्यक्ष डा. गणेश गुरुङसित रीतु थेबेले गरेको कुराकानी ।
युवालाई स्वदेश फर्काउने र देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेबारे तपाईंको धारणा के छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा भएका युवालाई स्वदेश फर्काउने भन्ने बहस हुन थालेको निकै समय भयो । हरेक सरकार र श्रममन्त्रीले यो महत्वपूर्ण कुरा हो, हामी गर्छौं भन्छन् । तर यो महत्वपूर्ण विषय कुरामा मात्रै सिमित रहन्छ । व्यवहारमा उतारिँदैन । हाम्रो समाज र आर्थिक समृद्धिका लागि गर्नैपर्ने कुरा हो यो ।
बहस मात्रै हुने, काम चाहिँ नहुने हो ?
हो । बहसका लागि बहस मात्रै भयो अहिलेसम्म । म योजना आयोगमा हुँदाखेरी पनि यो मुद्दामा कुरा उठायौं । हिन्दुस्थान र चीनमा उत्पादन हुने भन्दा नेपालमा
एक वर्षमा पाँच लाखदेखि साढे पाँच लाख मानिस श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन भनेर हामी कुरा गछौं । हाम्रो नीति त्यो जनशक्तिलाई रोजगार बनाउनेमा केन्द्रित छ । रोजगारीमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नु नै हाम्रो कमजोरी हो । त्यो गलत छ ।
उत्पादन हुनेमा तुलनात्मक दृष्टिकोणले बढी फाइदा र कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने कुरा के छ भनेर हामीले हिसावकिताव निकाल्यौं । त्यसमा ६० वटा खाद्यान्नका उत्पादन थिए ।
रोजगारी कतिले पाउने अनुमान गर्नुभएको थियो ?
देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न के के काम हुनुपर्छ ?
त्यहाँ ६ वर्ष काम गरेपछि पैसा, सीप र ज्ञान ल्याउँछौ, आफ्नै गाउँमा २५ वटा गाई पालेर कसरी स्वरोजगार हुन सक्छौ भनेर जानुअघि नै सिकाउनु पर्ने रहेछ । त्यसो गर्दा उसले गाउँमा फर्केर २५ वटा गाई कसरी पाल्ने भन्ने सीप सिक्दै सपना बुन्दै गर्दा आफ्नो तयारी पनि गर्दै गर्छ । त्यसका लागि तीन महिनासम्मको तालिम दिन सकिन्छ ।
युवालाई उद्यमशिलता सिकाउने प्याकेज दिन सकेनौं । अहिले पनि कोही व्यक्तिले कारखाना खोल्छु, अथवा बाख्रापालन, कुखुरापालन गर्छु भन्यो भने सरकारले उसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराको प्याकेज छैन । त्यही कारणले मानिसहरु स्वरोजगार हुन सकिरहेका छैनन् । उद्यमशिलता बनाउन के के व्यवसाय चल्न सक्छ, त्यो व्यवसायको सम्भाव्य अध्ययन सरकारले गरिदिनुपर्छ ।
देशको आर्थिक समृद्धि भनेको मानिसलाई उद्यमशिलता बनाउने पनि हो । उद्यमशिलता भनेको उसलाई बिस्तारै हिँड्न सिकाउने हो । विदेशबाट फर्केर आएका युवालाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । फर्केर आउने सबै युवाले नेपाल बस्ने रहर राख्छन् । तर अवसर नपाएर कतिपय युवा फर्कन्छन् ।
त्यस्तो अवस्थाका युवालाई उद्यमशिलता सिकाउने प्याकेज दिन सकेनौं । अहिले पनि कोही व्यक्तिले कारखाना खोल्छु, अथवा बाख्रापालन, कुखुरापालन गर्छु भन्यो भने सरकारले उसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराको प्याकेज छैन । त्यही कारणले मानिसहरु स्वरोजगार हुन सकिरहेका छैनन् । उद्यमशिलता बनाउन के के व्यवसाय चल्न सक्छ, त्यो व्यवसायको सम्भाव्य अध्ययन सरकारले गरिदिनुपर्छ ।
के भयो भने विदेशमा रहेका युवा फर्कन्छन् ?
उसलाई प्याकेजमा चाहियो । लामो समय खाडी वा मलेसिया बसिसकेकाले नेपालमा के गर्न सकिएला, परिवारसँग बस्न चाहन्छु, मेरो देशमा बस्न चाहन्छु भन्छन् । तर हामीले यहाँ के गर्ने, कसरी गर्ने र श्रोत र साधन कसरी जुटाउने भन्ने सिकाउने तथा दिन सक्ने संयन्त्रको निर्माण हुन सकेन ।
ठूला कलकारखाना खोलेर देशभित्रै रोजगारी दिन पनि सकिएला कि ?
सकिन्छ । त्यो चाहिँ हरेक तह तहको हुनुपर्‍यो । एकजनाले मःमः दोकान खोलेर तीन चार जनालाई रोजगार दिने देखि लिएर ठूल्ठूला कम्पनी खोलेर धेरै मानिसलाई रोजगारी दिने खालको हुनुपर्छ । पहिलो सम्भावना खाद्यान्नमा नै छ । किनभने खाद्यान्न हामीलाई दिनको तीन पटक चाहिन्छ ।
सीप, पैसा र उत्साह लिएर नेपाल फर्कनुहोस्, लगानीको वातावरण सरकारले बनाउँछ : पूर्वमन्त्री तुलाधर